Nabiyada iyo kutubtooda lagu sheegay Qur'aanku waxay ku hadlaan magaca ilaahyada kale (Tusaale: Yahve, Yehowah).. Tusaale ahaan, Elijah (Iliyaas) waa eray Cibraani ah oo macneheedu yahay "Ilaah waa Yahu / Jah" ., "Ilaah Waa Yehowah". Magacyada Malaa'igta sida Jibriil iyo Mikaa'iil ee Qur'aanka ku jira waxay la xidhiidhaan El (ama Il) sida diimaha kale ee Ibraahim. Allahumma, oo sidoo kale lagu sheegay Qur'aanka oo dhaqan ahaan loo isticmaalo Islaamka si loo bilaabo dua, wuxuu ahaa (malaha) ku dhawaaqida Carabiga ee ereyga Cibraaniga Elohim. Elohim waxa loo adeegsaday Cibraaniga macnaha jamac ahaan. (macnaha ilaahyada)
Suurad Suurah Suuratu (ingiriis: sura, surah, surat; carabi: ﺳﻮﺭﺓ; ama wadar ahaan: ﺳﻮﺭ suwar, sidoo kale sūrah) waa maqaro bog ama bogag aayado ka mid ah Quraanka kariimka ah ee Alle (s.w.t) ku soo dejiyay Nebi Muxamed
(n.n.k.h). Kitaabka Quraanka kariimka ah wuxuu ka kooban yahay boqol toban iyo afar Suuradood oo u sii kala baxa tiro badan oo aayado ah.
Dhererka Suuradaha Quraanku way kala duwan yihiin, tan ugu gaabani waa Suuratul-Al-Kawsar oo ka kooban 3 aayadood; halka suurada ugu dheeri tahay Suuratul-Al-Baqara oo ka kooban 286 aayadood. Boqol toban iyo afarta suuradood ee kitaabka Quraanka kariimka ah waxay kala yihiin 86 suuradood oo ah Makki iyo 28 Madani ah. Kala soocida noocan ah waxaay salka ku heeysaa meesha ay suuraduhu ku soo dageen, oo ka hor intii aanu Nebi Muxamed
ka tagin magaalada Makkah quraanka ku soo dagay waxaa loo yaqaanaa Makki, halka markuu Nebigu
u hijrooday magaalada Madiina waxyigii iyo quraankii ku soo dagay ay noqonayaan Madani.
Erayga suurat waxaa markii ugu horeeysay isticmaalay Nebi Muxamed
si uu ugu kala saaro iyo kala sooco qeybaha Quraanka kariimka ah. Taasi oo ku dhex jirta aayado Alle (s.w.t) soo dajiyey sida ku cad 24:1 "Waxaanu kugu soo dejinay suurado wata cadaymo, iyo waxaanu kugu soo dirney calaamado, calaamado cad-cad, kuwaasi oo si farxad leh aad ku xasuusani." Dhinaca kale, wadarta suurad waa suwar sida ku xusan Quraanka kariimka, aayadahan oo fasirka Af Soomaali ku noqonaya "Ma waxay dhaheen isagaa Allifay? Ku dheh "La yimaada toban suwar oo la mid ah (waa Quraankee) una yeedha cid kasta marka laga reebo Alle, haddii aad run sheegaysaan."
Aayad Aayah Aayatu (ingiriis: Ayah, Aayah; carabi: ﺁﻳﺔ āyah, wadar ahaan: ayat ama ayaat ﺁﻳﺎﺕ āyāt) waa eray af-Carabi ah oo macnaheedu tahay cadayn ama calaamad taasi oo ku dhex jirta suuradaha Quraanka kariimka ah ee Alle (s.w.t) ku soo dejiyay Nebi Muxamed
Dhererka aayadaha iyo Suuradaha Quraanku way kala duwan yihiin, tan ugu gaabani waa Suuratul-Al-Kawsar oo ka kooban 3 aayadood; halka suurada ugu dheeri tahay Suuratul-Al-Baqara oo ka kooban 286 aayadood.Boqol toban iyo afarta suuradood ee kitaabka Quraanka kariimka ah waxay kala yihiin 86 suuradood oo ah Makki iyo 28 Madani ah. Kala soocida noocan ah waxaay salka ku heeysaa meesha ay suuraduhu ku soo dageen, oo ka hor intii aanu Nebi Muxamed
↑ "waa maqaro bog ama bogag aayado ka mid ah Quraanka kariimka ah ee Alle (s.w.t) ku soo dejiyay Nebi Muxamed
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qur%27aan&oldid=228357"
Last edited on 11 Jannaayo 2022, at 00:35
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Jannaayo 2022, marka ee eheed 00:35.